के भिडियो गेमहरू विश्वशान्तिको कुञ्जी हुन्? - शान्ति शिक्षा को लागी वैश्विक अभियान
पल डार्वासीको युनेस्को कागजात तर्क गर्दछ कि भिडियो गेमहरू शान्तिको शिक्षा र द्वन्द्व समाधानको प्रवर्धन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। (फोटो: CBC)
जोनाथन ओरे द्वारा
(बाट पोस्ट गरिएको: सीबीसी समाचार। फेब्रुअरी २,, २०१।)
वर्षौंको लागि, भिडियो खेलहरूमा PR समस्याको एक बिट भएको छ।
गन-भारी खेलहरू जस्तै महान् चोरी स्वतः or ड्युटी कल ग्राफिक हिंसामा उनीहरूको जोडको कारण प्रायः खराब प्रभावहरू, विशेष रूपमा बच्चाहरूमा खराब प्रभावको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
मौसमी खेलाडीहरू, तथापि, टोकरीको सट्टा सकारात्मक सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सम्पूर्ण विधाहरूसँग परिचित हुनेछन् - उनीहरूले कूटनीतिमार्फत वैश्विक साम्राज्य निर्माण गरेका छन्। सभ्यता वा पास्टरल फार्महरूमा झुकाव Stardew उपत्यका.
खेलहरूमा विषय बिभिन्न भएको छ, र तपाईंलाई आक्रामक कार्यहरू गर्न बाध्य पार्नुको सट्टा धेरै खेलहरूले अब तपाईंलाई उनीहरूको पछाडि भएको निर्णयहरूको बारेमा सोच्न आग्रह गर्दछ।
लिनुहोस् मेरो यो युद्ध, जसले तपाईंलाई संघर्षको क्षेत्रबाट भाग्न खोज्ने नागरिकको जुत्तामा राख्छ, वा कागजात, कृपया, जहाँ तपाईं एक अध्यागमन अधिकारी खेल्नुहुन्छ १ 1980 s० को दशकको अधिनायक राज्यको सीमामा आवेदकहरूलाई स्वीकृति दिने वा अस्वीकार गर्ने।
समालोचकहरूले उनीहरूलाई "गम्भीर" वा "समानुभूति" खेलहरू बनाएका छन् जसले उनीहरूको आख्यानहरू र अन्तर्निहित मेकानिकहरू शक्तिशाली मानव भावनाहरू जगाउन प्रयोग गर्दछन्।
संयुक्त राष्ट्र संघले ध्यान लिएको छ, यसैले युनेस्कोको हो शान्तिको लागि महात्मा गान्धी शिक्षा संस्थान (युनेस्को-एमजीआईपी) टोरोन्टोका अन्वेषकलाई यस विषयमा विस्तृत अध्ययन लेख्न आदेश दियो।
त्यो मात्र होईन, तर संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नै दुई समानुभूति खेलहरू पनि रिलीज गर्ने छ।
सही गरेमा, यस्ता खेलहरू परम्परागत मिडियाजस्ता फिल्महरू वा प्रेरणादायी अनुकम्पाको किताबहरू भन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ, टोरन्टोको रोयल सेन्ट जर्ज कलेजमा पढाउने पाल दरवासी भन्छन्।
"भिडियो खेलहरूको बारेमा चाखलाग्दो कुरा यो हो कि तपाईं खेलिरहँदा निर्णयहरू लिनुहुन्छ, र त्यसपछि तपाइँले ती निर्णयहरूको नतीजा पनि सामना गर्नुपर्नेछ," दर्वासीले भने।
उहाँ भन्नुहुन्छ, विसर्जनको त्यो स्तरले “तपाईंलाई परिस्थितिको यथार्थताको निकटतामा ल्याउँछ,” र विभिन्न दृष्टिकोण र जीवनका अनुभवहरूको बीचमा अझ बढी समझ बढाउन सक्ने सम्भाव्यता छ।
अन्तर्क्रिया मार्फत समानुभूति
एक विज्ञप्तिमा, युनेस्को-एमजीआईईपी निर्देशक अनन्था दुराइप्पहले सीबीसी न्यूजलाई बतायो कि जब सहानुभूति पैदा गर्ने कुरा आउँछ, "भिडियो गेमहरूले परम्परागत कक्षाकोठाको शिक्षालाई बढावा दिन्छ।"
अध्ययनमा, दारवासी उनीहरूको सम्भावितताको लागि "खेलको दृष्टिकोण र समानुभूति खेती गर्न [र] नैतिक दुविधा पत्ता लगाउन को लागी धेरै खेलहरू जाँच गरे।"
अर्को शब्दमा, खेलाडीहरूले जटिल नैतिक प्रश्नहरूको कदर गर्न सिक्छन् जब उनीहरू आफैंले खेल्न बाध्य हुन्छन् र परिणामहरूको सामना गर्दछन्।
डार्वासीले अध्ययन गरेको खेलहरू प्राय: युद्ध क्षेत्रहरू जस्ता कार्य खेलहरूमा परिचित सेटि settingsहरूमा हुन्छन्। फरक यो छ कि तिनीहरूले तपाईंलाई शक्ति भन्दा कमजोरको स्थितिमा राख्छन्।
In हस१ 1994 XNUMX R रवाण्डन नरसंहारको क्रममा खेल्ने एक फ्रि-टु-प्ले गेम, खेलाडीहरूले हुत्ू गस्तीबाट ध्यान आकर्षित गर्न नहुने गरी तुत्सी महिलालाई लोरी गाउँदै सुताउन मद्दत गर्नुपर्दछ।
अध्ययन पनि मा हेर्छ 1979 क्रान्ति: कालो शुक्रवार, ईरानी क्रान्ति मा सेट एक साहसिक खेल। खेलाडीहरूले रेजाको भूमिका लिन्छन्, फोटोग्राफर शाहको बिरूद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने कागजात फोटोग्राफर जसले आफूलाई राजनीतिक अशान्तिमा झन् झन् बढ्दै गएको पाउँदछन्।
ईरानी क्रान्ति मार्फत बाँच्न चाहनुहुन्छ? त्यहाँ को लागी एक खेल छ
किन समानुभूति भिडियो खेलहरूमा अर्को ठूलो कुरा हो
धेरै दृश्यहरूमा तेहरानको कुख्यात इविन कारागारमा राखिएका रेजाले उनको प्रश्नकर्तालाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्नै पर्छ। प्रतिरोध वा अनुपालन गर्न छनौट गर्दा निर्धारण गर्दछ कि उसको भाइ, जो जेलमा छ, पनि यातना दिइनेछ कि हुन्न।
"म विश्वास गर्दछु कि सस्पेंस र एक्शन त्यति नै कडा हुन सक्छ जब कसैले तपाईलाई गोलीले हिर्काएर र छनौट गर्न को लागी खोजी गरेको छ, 'म कसलाई बचाउने - मेरो भाई वा मेरो चचेरो भाई?'" पछाडि इरानी क्यानेडाली निर्माता नवीद खौंसारीले भने 1979 क्रांति, गत वर्ष एक सीबीसी रेडियो साक्षात्कार मा.
"त्यो तत्व बन्दुक उठाएर सेनालाई पछाडि गोली हान्न जत्तिकै रहस्यमय हुन सक्छ।"
In मेरो यो युद्ध, तपाईले बर्सेनि शहरमा १ 1996 XNUMX Sara मा साराजेभोको बोटको युद्धको क्रममा घेराबन्दीको आधारमा धेरै नागरिकहरूलाई नियन्त्रण गर्नुभयो। उनीहरूले चोटपटक लगाउँदछन् र स्निपर आगोलाई वेवास्ता गर्दा खाना र आपूर्तिका लागि भग्नावशेषहरू सफा गर्नु पर्छ।
खेलाडीहरूले प्राय: चोर्नुपर्दछ, हानि पुर्‍याउनुपर्दछ वा बाँच्नको लागि अन्य पात्रहरूलाई मार्नु पर्छ।
रणनीतिक दृष्टिकोणबाट, तपाईं त्यसो गर्नका लागि प्रत्येक उपलब्ध संसाधनको फाइदा लिनुहुन्छ। तर के यो समीकरण परिवर्तन हुन्छ जब स्रोतहरू अन्य व्यक्तिको जीवन हुन्छन् जो केवल बाँच्न प्रयास गरिरहेका छन्?
मेरो यो युद्ध खेलाडीलाई सोध्दै उनीहरूको अगाडि समानुभूति ल्याउँदछ कि उनीहरू जीतका लागि करुणा बलिदान गर्न इच्छुक छन् कि छैनन्।
"भिडियो गेममा मेरो सहानुभूति कति चाँडो खस्कियो भन्नेमा म छक्क परें, जसले मलाई वास्तविक जीवनमा यसको नाजुकताको लागि अझ सजग बनायो," इभान नारसिसीले आफ्नो समीक्षामा लेखेका थिए गेमि Kot साइट कोटाकुका लागि।
"यो त्यस्तो प्रकारको खेल हो जुन सम्भाव्य रूपमा तपाईको खबर हेर्ने तरिका परिवर्तन गर्न, अरूलाई व्यवहार गर्न वा चुनावमा भोट हाल्न सक्छ।"
शान्ति शिक्षाका लागि खेलहरू
युनेस्को-एमजीआईपी सामाजिक न्याय शिक्षा सम्भावितताको अन्वेषण गर्न यति प्रतिबद्ध छ कि यसले घर-घर बनाएको दुई खेल सुरू गर्ने योजना बनाएको छ।
विश्व उद्धारमार्चमा हुने कारणले, खेलाडीहरूलाई विश्वव्यापी समस्याहरू जस्तै रोग, जfore्गल खेती र खडेरीलाई समाधान गर्न आग्रह गर्दछ। अर्को, संयुक्त राष्ट्रसंघको समावेशी सम्पत्ति सूचकांकमा आधारित अर्को नाम नभएको शीर्षकले खेलाडीहरूलाई छोटो अवधिको धन निर्माण र दीर्घकालीन स्थायित्व बीचको सन्तुलन कायम गर्न बाध्य पार्दछ।
यद्यपि उनी समानुभूतिले चालित खेलहरूको सराहना गर्दछन्, डार्वासी भन्छिन् कि तिनीहरूलाई खेल्दा तुरुन्तै कसैलाई राम्रो व्यक्ति हुन सिकाउँदैन - पहिलो व्यक्ति शूटर खेल्नुबाहेक आफैले वास्तविक जीवनको हिंसा जन्माउँछ।
"यस उदयकालीन, जटिल र द्रुत रूपमा विकसित माध्यमले सामाजिक भलाइको लागि अधिक प्रभावकारी ढ le्गले उपयोग गर्न सक्नु अघि धेरै काम गर्न बाँकी छ," उनी लेख्छन्।
# भिडियो खेलहरू
शान्ति, स्थिरताका लागि शिक्षामा लगानी गर्नुहोस् - पहिलो महिला (केन्या)
शैक्षिक कार्यक्रम अधिकारी: संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय
हिरोशिमा स्मारक: संयुक्त राष्ट्र प्रमुखले परमाणु मुक्त लक्ष्यमा ढिलो प्रगतिमा खेद व्यक्त गरे
अगस्ट 6, 2021 समाचार र हाइलाइटहरू 0
परमाणु मुक्त संसार हासिल गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रतिबद्धता लाई रेखांकित गर्दै, महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सरकारहरुलाई यो लक्ष्य लाई एक वास्तविकता बनाउन को लागी प्रयासहरु लाई बलियो बनाउन आग्रह गरेका छन्। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]
हामीले भर्खर आणविक हतियारहरू प्रतिबन्धित गर्यौं!
जुलाई 7, 2017 समाचार र हाइलाइटहरू 2
आणविक हतियारको निषेध सम्बन्धी सन्धि, जुन आज संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलन कोठा १ मा १२२-१ को मतले ठूलो पारिएको थियो र यसले आणविक हतियारको कलंक र उन्मूलनका लागि बाध्य पार्ने मुद्दा बनायो। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]
केन्याकी पहिलो महिला मार्गारेट केन्याट्टाले पहिचान गरे कि शिक्षा शान्ति, स्थायित्व र सामाजिक एकताको लागि महत्वपूर्ण छ। "कुनै पनि देश जसले आफ्ना बच्चाहरूलाई उपेक्षाको छायाँमा डुबाउन दिनेछ त्यसले शान्ति र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने आशा गर्न सक्दैन," उनले गत हप्ता भने। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]